OPPO Reno4 Pro ရဲ့ OLED Panel အကြောင်းသိကောင်းစရာ | OPPO မြန်မာ
သင်၏နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသကို ရွေးချယ်ပါ လက်ရှိဝဘ်ဆိုက်တွင် ဆက်နေမည် အခြားဝက်ဆိုက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်မည်
OPPO Reno5 New
ဖုန်းအားလုံးကို ကြည့်မည် All Reno series
OPPO A55 New
ဖုန်းအားလုံးကို ကြည့်မည် All A series
OPPO F19 Pro New
OPPO F19 New
ဖုန်းအားလုံးကို ကြည့်မည် All F series
IoT ထုတ်ကုန်များ အားလုံးကို ကြည့်မည်
သုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှု စင်တာ
OPPO Reno4 Pro ရဲ့ OLED Panel အကြောင်းသိကောင်းစရာ
ဒါက OPPO Reno4 Pro (OPPO Reno4 Pro ကို လက်ရှိအချိန်မှာ မြန်မာငွေ ၆၉၉,၉၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီး Shop.com.mm ကနေ Delivery ခ ပေးစရာမလိုပဲ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။)ရဲ့ Display အကြောင်း ရည်ရွယ်တဲ့ article တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် ဖတ်တဲ့သူတွေ ဗဟုသုတပိုရစေဖို့အလို့ငှါ လက်ရှိစျေးကွက်ထဲက Smartphone တွေကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီဖို့ ဘယ်အချက်တွေကို ဦးစားပေးသင့်လဲဆိုတာလေးပါ တစ်ခါတည်းထည့်ပြောပြပေးပါ့မယ်။
၂၀၂၀ လို ကာလမှာ Refresh rate များတဲ့ Display တွေဟာ ပွတ်ရတာ smooth ဖြစ်တဲ့ feeling ရအောင် အတိုင်းအတာတစ်ခု ပံ့ပိုးပေးနိုင်တာကြောင့် user တွေကြား ခေတ်စားလာသလို Company တွေဘက်ကလည်း ဒီ feature ကို Flagship တွေပေါ်ကနေပြီး Mid-range တွေဆီ ယူဆောင်ပေးလာကြပြီ။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုအခက်အခဲရှိလာတာက စျေးနှုန်းကန့်သတ်ချက်ပါ။ High refresh rate ရနိုင်မယ့် AMOLED Display တွေဟာ စျေးနှုန်းအားဖြင့် ပိုများကြတယ်။ ဒါကြောင့် Mid-range က refresh rate မြင့်မြင့်ပါတဲ့ ဖုန်းအများစုကို LCD Display တွေနဲ့ တွေ့နေရတာဆို ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုတော့ ဖုန်းဆို AMOLED နဲ့မှဆိုတဲ့ fan တွေအတွက် Refresh Rate များတဲ့ LCD ကိုရွေးမလား၊ ပုံမှန် AMOLED ကိုရွေးမလားဆိုတာက စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပြီပေါ့။
OPPO Reno4 Pro ရဲ့ Display specification ကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် 6.5”, Full HD+ AMOLED ကိုမှ Curved Display သုံးထားတယ်။ Refresh Rate အားဖြင့်လည်း 90Hz ထိ support လုပ်တာ တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် သူ့ Display ကို Display ကောင်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်မလား။ အရင်ဆုံး LCD နဲ့ AMOLED တွေကြားက ကွာခြားချက်လေးတွေကို နဲနဲ စာပြန်နွှေးကြတာပေါ့။
တစ်ချို့က LCD Display လို့ ကြားလိုက်ရင် နှာခေါင်းရှုံ့ချင်ကြတယ်၊ မကောင်းမြင်ကြတာများတယ်။ ဒီအတွေးက အတော်မှားတဲ့အတွေးပါ။ LCD ရော OLED မှာပါ သူ့အားသာချက်နဲ့သူရှိပါတယ်။ Quality ကောင်းတဲ့ LCD Display တစ်ခုမှာ အားသာချက်တွေအနေနဲ့
-တစ်ခုခုဆို ပြင်စရိတ်သက်သာမယ် စတဲ့အားသာချက်တွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့် iPad Pro ရဲ့ Pro Motion လို Display မျိုးက Quality ကောင်းတဲ့ LCD Display အဖြစ် ရပ်တည်နေနိုင်တာပေါ့။
ဒါဆိုရင် AMOLED တွေပေါ်မှာရော ဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိနိုင်မလဲ?
-Media အသုံးပြုများ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်များတဲ့သူတွေ သဘောကျတဲ့ စိုတောက်တဲ့ Color မျိုး ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။
-စစ်မှန်တဲ့ အနက်ရောင် (True Black) ကို ပေးစွမ်းနိုင်တယ်။
-Contrast Ratio (အဖြူနဲ့ အနက်ကြားက အချိုး) မြင့်တယ်။
-Flexible ဖြစ် (ခေါက်နိုင်၊ ကွေးနိုင်) တယ်။
-In-Display Fingerprint လို နည်းပညာမျိုးကို သုံးနိုင်မယ်။
-Always-on Display အဖြစ် သုံးနိုင်မယ် စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် Social Media နဲ့ Movie အသားပေး user တွေ အကြိုက်တွေ့တဲ့ Display အဖြစ် လူကြိုက်များလာတာပေါ့။
ဆိုတော့ LCD, OLED ဘယ်ဟာပိုကောင်းတဲ့ ငြင်းချက်ထုတ်တာထက်စာရင် ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ကိုက်အောင် ရွေးချယ်နိုင်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါလိမ့်မယ်။ OPPO Reno4 Pro ရဲ့ Display ကတော့ Social Media user တွေ တကယ့်အကြိုက်တွေ့မယ့် Display ကောင်းတစ်ခု ဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲဆိုတာ အောက်ကအချက်တွေကို ဆက်လေ့လာကြည့်ကြတာပေါ့။
High Quality AMOLED ဆိုတာ....
ဟုတ်ပြီ။ ကိုယ်က AMOLED fan မို့ AMOLED Display ပါတဲ့ဖုန်းကို ရွေးလိုက်ပြီဆိုပါတော့။ AMOLED Display တိုင်းဟာ Quality အတူတူလို့ မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ? AMOLED ချင်းအတူတူ ထုတ်လုပ်တဲ့ Company နဲ့ အသုံးပြုတဲ့ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး Display Quality ကွာခြားမှုရှိတာကြောင့်လို့ ကျွန်တော်တော့ ဖြေချင်တယ်။ (AMOLED အမည်ခံပြီး ရုပ်ထွက်က အားရဖို့မကောင်းတာမျိုးတွေ အနည်းနဲ့အများတော့ ကြုံဖူးခဲ့ကြမယ် ထင်ရဲ့) နောက်ပြီး AMOLED ချင်းအတူတူမှာတောင် ကွေး၊ ဆန့်နိုင်မှုရှိ၊ မရှိအပေါ်မူတည်ပြီး Display တစ်ခုရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ဟာလည်း ကွာခြားမှုရှိနေပြန်ပါတယ်။ ဖတ်ဖူးသလောက် Curved AMOLED တွေဟာ Flat AMOLED တွေထက် ကုန်ကျစရိတ် ၂ဆနီးနီးရှိတယ်လို့တောင် တစ်ချို့သတင်းတွေမှာ ရေးသားထားကြတယ်။
ဆိုတော့ OPPO Reno4 Pro ရဲ့ Display ပိုင်းကို ပြန်လေ့လာကြည့်ရရင် Samsung ရဲ့ Super AMOLED ကိုမှ ဘေးဘောင်နှစ်ဖက်အခုံးဖြစ်တဲ့ Curved Display ကို သုံးပေးထားတယ်။ user တွေကြားမှာ Flat Display ကြိုက်တဲ့သူ၊ Curved Display ကြိုက်တဲ့သူရယ်လို့ အကြိုက်တွေ ကွဲနိုင်ပေမယ့် စျေးကွက်ထဲမှာတော့ Curved Display တွေဟာ ပိုပြီး Premium ဆန်တဲ့အမြင်နဲ့ feeling ကို ပေးနိုင်တဲ့ Display တွေအဖြစ် သတ်မှတ်ကြတာကိုတော့ လက်ခံကြရပါလိမ့်မယ်။
သူ့ Brightness အပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း အမြင့်ဆုံးပမာဏဟာ 800nits (Normal: 500nits, HBM:800nits, HDR Local: 1100nits) အထက်ရနိုင်ပြီး ဒီပမာဏဟာ Flagship AMOLED Display တွေမှာ အတွေ့များတဲ့ ပမာဏလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ HDR Video တွေအတွက် support ပေးနိုင်တဲ့အပြင် Color ပိုင်းမှာလည်း စိုတောက်တာကြိုက်လား၊ အရောင်ငြိမ်တာ သဘောကျလား စတဲ့ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့လိုက်အောင် ချိန်ညှိခွင့်ပေးထားတာ သူ့ Display ကို Daily usage experience မှာ အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်။ အဲလိုအချက်တွေကိုမှ Selfie Camera ကို Punch Hole အဖြစ် ဘယ်ဘက်ထောင့်ကို ပို့လိုက်တဲ့အခါ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ ဂိမ်းဆော့တဲ့ အနေအထားတွေမှာ တကယ့် Full Screen နီးပါး experience ကို ခံစားနိုင်တာဟာ OPPO Reno4 Pro ရဲ့ Display နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြီးမားတဲ့အားသာချက်လို့ ဆိုရမှာပါ။
Refresh Rate များတိုင်း ကောင်းသလား?
အကောင်းဆုံး၊ အများဆုံး၊ အမြင့်ဆုံးကို လိုချင်တာ လူ့သဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီများပြားတဲ့အရာတွေက ကိုယ့်အတွက်အသုံးတည့်ဖို့၊ အသုံးချနိုင်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ခုလိုပြောလို့ 120Hz Display တွေကို အသုံးမဝင်ဘူးလို့ မဆိုလိုဘူးနော်။ Refresh rate များခြင်းဟာ သုံးရတာ smooth ပိုဖြစ်အောင် အထောက်အကူပေးနိုင်တာမှန်ပေမယ့် Performance ကောင်းတဲ့ Chipset, Stable ဖြစ်တဲ့ UI (Software) တို့ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုကောင်းဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်လို့ Display က 120Hz ထိ ရပေမယ့် သုံးထားတဲ့ Chipset ကအဆင်မပြေရင်၊ နိမ့်နေခဲ့ရင် High refresh rate အရသာကို အပြည့်အဝရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Snapdragon 720G လို SoC ကို 90Hz Refresh rate နဲ့ တွဲပေးတာဟာ “သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန် တန်” သလို Chipset အတွက် မလိုအပ်တဲ့ Workload အပိုတွေမဖြစ်ပဲ Battery ကိုလည်း ဝန်မဖြစ်စေမယ့် မျှတတဲ့ ရွေးချယ်မှုလို့ ယူဆချင်တယ်။
ဒါကြောင့် သုံးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေ ဘယ်လိုပဲကွဲပြားပါစေ၊ Display ဆိုတာ ဖုန်းတစ်လုံးပေါ်က လူတွေ နေ့စဉ်ထိတွေ့အသုံးပြုမှု အများဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ပြောရင်တော့ ငြင်းနိုင်လိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဖုန်း Display ဟာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆိုတော့ Social Media နဲ့ လက်ပွန်းတတီးရှိသူတွေ၊ ဖုန်းနဲ့ ရုပ်ရှင်အကြည့်များသူတွေ၊ AMOLED Display ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် Premium feeling နဲ့ Quality ကောင်း ပေးနိုင်မယ့် OPPO Reno4 Pro ကို Display ပိုင်း အားသာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအဖြစ် ထောက်ခံပေးချင်ပါတယ်။ OPPO Reno4 Pro ကို လက်ရှိအချိန်မှာ မြန်မာငွေ ၆၉၉,၉၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီး Shop.com.mm ကနေ Delivery ခ ပေးစရာမလိုပဲ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ရှေ့သို့ ၅ မိနစ်အားသွင်းပြီး ၄ နာရီ ဗီဒီယိုပြန်ကြည့်နိုင်သည့် OPPO Reno4 Pro ရဲ့ 65W SuperVOOC 2.0 charge
Security Response စင်တာ
အောက်မှ အပေါ်သို့ Myanmar (မြန်မာ)
09-650177770 / 09-650177771
ဤဆိုက်ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် အသုံးပြုမှုကို စီစစ်ရန်အပြင် သင်၏ လေ့လာကြည့်ရှုမှု အတွေ့အကြုံကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်စေရန် ကွတ်ကီးများနှင့် အလားတူ နည်းပညာများကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကို ဆက်လက်၍ လေ့လာကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်၊ ယင်းကွတ်ကီးများ၏ အသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူပါသည်။နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန်.